IHE ỌMỤMỤ: Mkpụrụedemede Igbo ''ABỊỊDỊỊ'' - Eastern Reporter
ASUSU NA OMENALA IGBO
IHE ỌMỤMỤ: Mkpụrụedemede Igbo ”ABỊỊDỊỊ”
October 19, 2018 October 17, 2018 easternreporter	0 Comments Igbo
IHE ỌMỤMỤ NKE MBỤ: Mkpụrụedemede Igbo(ABỊỊDỊỊ) na-etu esi akpọ na ihe eji akpọ ha.
Ọtụtụ ndị amaghị mkpụrụedemede Igbo, ha
hugodu ebe e dere ha, ha agaghị akpọpụtanwu ha. Ihe nke a bụ na-agbanyeghi na ụfọdụ ndị a bi n’ala Igbo tinyekwuolu na ha bụkwa zi ndị okenye. Ọtụtụ ndị bụ ndị na-anụ asụsụ Igbo nke ọma, mana ha amaghị asụ ya, ha amakwughi agụ ya. Ụfọdụ ma-asụ, na-anụ ya nke ọma, mana ha amaghị agụ ya màọbụ mara ede ya. N’ime ihe nile ndị a, onye ọbụla nwere nnukwu mmasị maka ịmụta asụsụ Igbo nke
ọma, ga-ebido na mkpụrụedemede Igbo. Onye ahụ kwesịrị ịma ka e si akpọpụta ha, nke a ga-enyere aka na igụnwu ihe e dere n’asụsụ Igbo.
Onye na-anụ asụsụ Igbo nke ọma mana o maghị asụ ya, ịmụta mkpụrụedemede Igbo ga-enyere ya aka nke ukwu. Nke a bụ maka na
ezi nghọta o nwere n’ịnụ ya, ga-eme ọ mụta mkpụrụedemede, inwe nghọta n’ihe e dere ede ga-adị mfe ma nyere aka n’ịsụ ya.
Taata, anyị ga-etinye anya na mkpụrụedemede Igbo. Anyị ga-eme ya ka ọ dị mfe onye amaghị etu esi akpọpụta ha, nwee ike ime nke a. Anyị ga-eji ụfọdụ mkpụrụokwu onye
ọbụla ma, were mee nke a. Ka anyị bido.
Mkpụrụedemede Igbo dị iri atọ na
isii. Mkpụrụedemede Igbo bụ ndị a:
a b ch d e f g gb gh gw h i ị j k kp kw l m n ṅ nw ny o ọ p r s sh t u ụ v w y z.
O nwere ụfọdụ mkpụrụedemede ndị na-adịghị na nke bekee dị na nke Igbo, ha bụ ndị a: ọ, kw, gw, kp, gb, gh, ny na nw. Ime ka ihe omụmụ dị mfe maka onye ukwu na onye nta, anyị ga-edepụta ụfọdụ okwu n’asụsụ bekee iji nyere aka ịchọ ha na akwụkwọ nkọwa okwu
ya na iji gosịpụta myìrì dị na mkpụrụedemede Igbo na nke Bekee.
Anyị nwere ụdaume (vowel) asatọ n’asụsụ Igbo. O nweghị mkpụrụokwu Igbo anyị ga-emebenwu na enweghị ụdaume n’ime ha. Abịa kwuo o gaghị ekwe omume ịhụ ebe mgbochiume abụọ nke asụsụ Igbo dịkọtara ọnụ na-enweghị ụdaume dị n’etiti ha, belụsọ na imelime okwu ‘m’ na ‘n’ bidoro. Ha bụ ndị a: a,
e, i, ị, o, ọ, u, na ụ. Ndị nwere ntụpọ n’okpuru ha bụ ụdamfe tinyekwuolu “a”. Ndị nke ọzọ bụzi
← 2019 Election: Peter Obi speaks on Southeast govs working against him
2019 Election: Atiku attacks Buhari again, reveals what he will do to President →